Deeqda Kala-bixinta IWCA - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista
Sannadle bishii Abriil 15.
Ururka Xarumaha Qorista Caalamiga ah (IWCA) wuxuu u adeegaa inuu ku xoojiyo bulshada xarunta qoraalka dhammaan howlaheeda. Ururku wuxuu bixiyaa deeqda cilmi baarista ee 'IWCA Dissertation Research' si ay u taageeraan ardayda dhakhaatiirta ah markay ka shaqeynayaan qorista buugaagta xarunta ku saabsan Deeqda ayaa loogu talagalay in lagu maalgeliyo kharashyada ay galaan xubnaha ardayda ee dhakhaatiirta ah ee ka shaqeynaya dhammaystirka shahaadada iyo shahaadada dhakhtar. Lacagta waxaa loo isticmaali karaa kharashyada nolosha; sahayda, qalabka, iyo softiweerka; u safro goobaha cilmi-baarista, si aad u soo bandhigto cilmi-baaris, ama ka-qaybgal shirar ama machadyo khuseeya xirfadda; iyo ujeedooyin kale oo aan halkan lagu soo koobi doonin laakiin taageerida arday qalin jabiya. Ardayda dhakhaatiirta ah ee haysta rajo-gelinta la oggolaaday oo ku jira heer kasta oo cilmi-baaris / qoris ka baxsan rajada ayaa lagu dhiirrigelinayaa inay codsadaan.
Kuwa qaata deeqaha waxay ka heli doonaan $ 5000 jeeg IWCA marka loo xusho qofka ku guuleysta abaalmarinta.
Codsiga waa in lagu soo gudbiyaa waqtiga kama dambaysta ah ee loo baahan yahay iyada oo loo marayo Xariirka Xubinnimada IWCA. Xirmooyinka codsiga oo dhameystiran waxay ka koobnaan doonaan waxyaabaha soo socda hal feyl pdf:
Warqad dabool ah oo ku socota gudoomiyaha deeqaha hada bixiya ee iibiya guddiga faa iidooyinka wadajirka ah ee ka dhalan doona taageerada dhaqaale. Si gaar ah, warqaddu waa inay sameysaa waxyaabaha soo socda:
Codso tixgelinta IWCA ee dalabka
Soo bandhig codsadaha iyo mashruuca
Sharaxaad ka bixin qorshayaasha dhammaystirka mashruuca
Fursad la oggolaaday
Laba warqadood oo tixraac ah: Mid agaasimaha tafsiirka iyo mid xubin labaad oo ka tirsan guddiga faafinta.
U sii gudbinta IWCA, daryeelka Guddoomiyaha Guddiga Deeqaha, nuqulada daabacaadda natiijada ama bandhigyada
Ku xeree warbixinta horumarka IWCA, daryeelka Guddoomiyaha Guddiga Deeqaha, oo ku eg laba iyo toban bilood gudahood laga bilaabo helitaanka lacagaha deeqaha.
Markaad dhamayso mashruuca, u soo gudbi warbixintii ugu dambaysay ee mashruuca iyo PDF ka mid ah dukumintiga la dhammaystiray Guddiga IWCA, oo daryeelaya Guddoomiyaha Guddiga Deeqaha
Si adag u tixgeli inaad u soo gudbiso qoraal gacmeed ku saleysan cilmi baarista la taageeray mid ka mid ah daabacadaha la xiriira IWCA: Xarunta Wax Qorista, Ama in Dib u Eegista Faca. Diyaar u noqo inaad la shaqeysid tifaftiraha (yada) iyo dib u eegaha (yada) si ay dib ugu eegaan qoraalka gacanka si loo daabaco
2021: Yuka Matsutani, " Dhexdhexaadinta Farqiga u dhexeeya Aragtida iyo Dhaqanka: Daraasadda Falanqaynta Wadahadalka ee Tilmaamaha Isdhexgalka iyo Tababarka ee Xarunta Qoraalka ee Jaamacadda"
2020: Jing zhang, "Kahadalka wax ku qorista Shiinaha: Sidee Xarumaha Qoraalku ugu adeegaan Baahida Ardayda Shiinaha?"
2019: Lisa Bell, "Tababarayaal Tababar loo siinayo Scaffold oo ay la socdaan Qoraayaasha L2: Mashruuca Xarunta Wax Qorista Cilmi-baarista"
2018: Lara Hauer, "Qaababka Translingual ee ku wajahan umeerinta Qorayaasha luqadaha badan ku hadla ee Xarumaha Qoraalka Kulliyadda" iyo Jasal ahaan Newman, “Farqiga udhaxeeya: Dhegeysiga oo ay ku kala duwanyihiin Kalfadhiyada Xarunta Qoraalka Bulshada iyo Jaamacada”
2017: Katrina Bell, “Macallin, Macallin, Aqoonyahan, Maamulaha: Fikradaha La-taliyayaasha Qalin-jabinta ee hadda iyo kuwa Qalin-jabinta ah”